Zava-pisotro | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
4 kanto be dia be izay azo atao amin'ny tananao manokana amin'ny 5 minitra mialoha ny taom-baovao
Cocktail malaza amin'ny fety an-trano amin'ny Taom-baovao dia lamaody sy mahafinaritra tokoa! Manolotra zava-pisotro 4 malaza eran'izao tontolo izao izahay. Mahandro azy ireo ara-bakiteny 5 minitra alohan'ny chimes - ...
Inona no dite - andao hamerina
Inona no atao hoe dite? Heveriko fa maro amintsika no mahalala tsara ny valin'io fanontaniana io, saingy, andao jerena amin'ny antsipiriany bebe kokoa! Betsaka amintsika no misotro kafe amin'ny sakafo maraina, nefa koa ireo tia dite ...
Inona no ilàna ronono? Ahoana ny fahasamihafana amin'ny mahazatra?
Nahoana no mahasoa ny ronono voaendy? Inona no tsy itovizany amin'ny mahazatra? Ny ronono voaendy dia tsy manam-paharoa amin'ny endriny, tsy misy fampitahana azy. Ny firafitry ny ronono toy izany dia misy singa mahasoa mihoatra ny zato, ilaina fotsiny ny mampiditra azy io amin'ny sakafo kely ...
Ahoana no hanaovana cocktail maitso?
Ahoana ny fomba hanaovana cocktail marikivy? Matetika ny torolàlana momba ny fonosana amin'ny cocktail dia milaza) Ny bubble amin'ny alàlan'ny mololo, inflate ary masoandro Tsy misy varingarina oksizenina - tsia! Nihinana an'ity ny tenako tamin'ny fahazazako: mipetraka amin'ny ...
Tsy maintsy mamaky lavaka ao anaty fonon-tanana eo amin'ny vilia divay misy diloilo ve aho?
Ilaina ve ny manindrona loaka amin'ny fonon-tanana amin'ny divay vita amin'ny divay namboarina? Amin'ny fonon-tànana, tsy nanao izany mihitsy aho, tsy afaka milaza. FA, arakaraka ny fitsipiky ny fanamboarana divay dia manamboatra fivarotana solika izy ireo. (tombo-drano) Re ...
Inona no fiainan'ny ronono sterilises ary nahoana? Eny, momba ny fanoratana pasteurized, azafady.
Inona ny fiainana talantalana amin'ny ronono voadio ary nahoana? Manorata momba ny pasteurized azafady. Ny ronono nopetahana dia ronono izay voahodina amin'ny mari-pana 70-75C. Ny tanjon'ny pasteurisation dia ny fanimbana ny microflora misy poizina. Misaotra an'ity fanodinana ity ...
Inona no arabika? Inona no karazana kafe hafa?
Inona ny Arabica? Inona avy ireo karazana kafe hafa? Mocha! Arabica dia karazan'olom-bolo any Etiopia sy Robusta (kafe kôngôla). Ny hazo kafe hafa, ary misy maro aminy, dia tsy mamokatra voamadinika azo hanina. Karazana ...
Inona ny labiera matanjaka iray?
Inona no labiera mainty matanjaka mahery misy tanjaka 7 sy avo kokoa Ny fanasokajiana labiera amin'ny loko dia miparitaka any Rosia, ary koa any amin'ny firenena eropeana hafa, ohatra, any Espana. ...
ahoana ny fomba famokarana kirihibe mangatsiaka KISSEL ????
ahoana no fahandro KISEL amin'ny serizy mangatsiaka ???? Araraka amin'ny rano ny voaroy, ampio siramamy, mahandro compote matsiro. Arotsaho ny starch: ho an'ny compote 1 litatra - arotsaho amin'ny rano kely na compote kely ny sotro fihinana iray sotro. ...
Ahoana no fanaovana lemonade ao an-trano?
ahoana ny fanamboarana voasarimakirana ao an-trano? voasarimakirana roa (vaovao, be ranony), rano iray litatra sy sasany, siramamy enina sotro fihinanana ary ravina mint vaovao roa. Manasa ny voasarimakirana izahay, manapaka ny antsasaky ny voasarimakirana ary ...
Ny vodka ao amin'ny frizidera dia afaka manalefaka?
Afaka mangatsiaka ve ny vodka ao anaty vata fampangatsiahana? raha tsara, avy amin'ny -28,7 C sy ambany, fa raha ny tena izy dia miovaova ny vidiny, manodidina ny 30 C ny moonshine mangatsiaka. Eo ambany -25 dia mihamangatsiaka. Wikibolana anglisy. Palnaya - avy amin'ny ...
ny fizotran'ny fifangaroana divay dia antsoina hoe - ...
ny dingan'ny fampifangaroana divay dia antsoina ... - hanomboka hifangaro amin'ny tsy fifangaroana ny divay isika ... fa ny tsy maintsy afangaro amin'ireo ranom-boankazo izay mbola tsy azo antsoina hoe divay, mazàna dia tsy nafindra toerana mihitsy ny divay, raha ...
Ahoana ny fahazoana ny kafe tsy misy kafeinina?
Ahoana ny fahazoana ny kafe tsy misy kafeinina? Toy ny vehivavy fingotra izy io. Ity dia kafe tsy misy kafeinina, sotroiko amin'ny fahavaratra, rehefa miakatra ny tsindry. Tsy afaka milaza aho fa faly be, fa ny dite ...
Tiorka tsara tsy lafo ...?
Tiorka tsara tsy lafo ...? Aleo noho ny moonshine tsara! Aleoko: 1). Label mena2). Famaritana 5 Ireo whisky ireo dia matsiro, malefaka, ary hatramin'ny arivo dia azo apetraka. soavaly fotsy whisky tsara amin'ny ankapobeny - whisky lafo vidy whisky tsara kokoa ...
Inona no anaran'ireo manandrana divay?
iza ny anaran'ireo izay manandrana ny divay? divay manandrana zzzz zzzz zzz zzz Tsy manandrana ny vokatra fotsiny ny mpamantatra fa manome tombana azy fa tsy iharan'ny tsikera. Na tany Roma fahiny aza dia nilaza izy ireo hoe: ...
Omeo recipe ny eggnog
omeo ny fomba fahandro ho an'ny atody atody, 2 - 3 tsp. siramamy, 1 tsp. dibera, 1 tsp. vovoka kakaô. Totoina ho lasa homogène ny zava-drehetra. Afaka manampy ranom-boasarimakirana vitsivitsy ianao. Eggnog ...
Ahoana no handraisan'i Grog any an-trano ???
Ahoana ny fomba hanaovana Grog ao an-trano ??? RESEP COFFEE ATP Grog Ho an'ny olona 6-8: rum 0.5 l, koakà 100 ml, siramamy siramamy 50 ml, fampidirana kafe 500 ml, voasarimakirana. Araraka mafana (fa ...
Inona no ataon'ity whisky ity? Inona ny firafitr'izy io?
Avy amin'ny inona ny whisky Scotch? Inona no firafiny? Moonshine !!! Miampy ny barika renibeny !!!! raha ny marina, moonshine, voahodin-kazo amin'ny kesika, efa antitra ao anaty barika i Whisky dia zava-pisotro misy alikaola mahery avy amin'ny ...
Port 777! Mihevitra ve ianao fa ilaina ny misotro ity fisotroana ity? Ary iza no misotro, manorata inona ny fahatsapana sy ny fomba hanandramana!
Seranan-tsambo 777! Heverinao ve fa mendrika ny misotro an'io zava-pisotro io? Ary iza no nisotro, soraty izay fahatsapana sy ny tsirony! Epika koa dia azo soratana momba ity fisotroana ity. Tamin'ny taona 60 ...
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny labiera sy ny fisotro amin'ny labiera?
Inona avy no mahasamihafa ny fisotro labiera sy labiera? Ny teny hoe "fisotro labiera" dia tsy misy afa-tsy any Russia ihany, tafiditra tao amin'ny Regulated Technologies momba ny famokarana labiera sy zava-pisotro miorina amin'izany avy amin'ny State Dura of the Russian Federation under ...
79 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,522.